ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော Snapdragon 845 ၏ရက်စွဲကိုစစ်ထုတ်သည် Androidsis
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောတင်ပြသည့်ရက်စွဲ Snapdragon 845 ကိုစစ်ထုတ်သည်
ကျနော်တို့လပေါင်းများစွာပါပြီ ကောလာဟလများကိုနားထောင်ခြင်း ၏ဆိုက်ရောက်အကြောင်းကို အသစ် Qualcomm ပရိုဆက်ဆာ။ ကျနော်တို့ကိုရည်ညွှန်းသည် Snapdragon 845ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုအတွက်ရည်ရွယ်သည် Snapdragon 835 ကိုအစားထိုးလိုက်ပါကုမ္ပဏီအတွက် ၀ မ်းမြောက်မှုများစွာဖြစ်စေသော high-end processor
အပေါ် Snapdragon 845 သည်ကောလဟာလများထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးမကြာသေးမီလများကဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်၎င်း၏ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲပေါ်တွင်ယခုအချိန်အထိအဘယ်သူမျှမစစ်မှန်တဲ့ခဲ့ပေမယ့်။ သို့သော်မကြာသေးမီရက်များအတွင်းက ဖြစ်နိုင်သောဖြည့်စွက်နေ့စွဲ။ ဤကောလာဟလများမှန်ကန်နိုင်သည်ဟုထင်ရသည် မည်သည့်အချိန်တွင် Qualcomm ပရိုဆက်ဆာအသစ်ရောက်ရှိမည်နည်း။
သတင်းအချက်အလက်ဤအချိန်တရုတ်ထံမှလာသည်။ ပုံတွင်ပေါက်ကြားထားသည် နာမည်ကြီးတရုတ်လူမှုကွန်ယက် Weibo။ ဒီပုံကaကိုဖိတ်ကြားသည် နည်းပညာထိပ်သီးအစည်းအဝေး။ ဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးဟာဝိုင်ယီတွင်ကျင်းပနိုင်ပြီးဒီပရိုဆက်ဆာကိုတင်ဆက်ရန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပိုစတာမှာ Qualcomm ရဲ့နာမည်ကိုတွေ့နိုင်တယ်။ များစွာသောသူတို့ကဖြစ်လိမ့်မည်ထင်သောအရာကိုသည် Snapdragon 845 ၏တင်ပြချက်.
တင်ပြနိုင်သည့်ရက်စွဲ Snapdragon 845 သည်ဒီဇင်ဘာလတွင်ဖြစ်သည်။ ကွန်ကရစ်ဖြစ်ရန် ဒီဇင်ဘာလ4နှင့် 8 အကြား။ ဒီနည်းပညာဆိုင်ရာထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုကျင်းပမယ့်အဲဒီရက်တွေမှာပဲ။ တကယ်လို့မှန်ရင်၊ တစ်လကျော်လောက်မှာဒီအဆင့်မြင့်ပရိုဆက်ဆာကိုတင်ပြလိမ့်မယ်။ အသုံးပြုသူများကကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြရသောတစ် ဦး က Processor ကို။
ဒီပုံအပြင်အပြင်၊ ဒီပရိုဆက်ဆာရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုလူသိများတယ်။ Kyro ၏ဗိသုကာနှင့်ပြုလုပ်ထားပုံရသည် Cortex-A75 core များ၊ Adreno 630 GPU နှင့် X20 modem တို့ဖြစ်သည် ၏ဂီယာအမြန်နှုန်းရောက်ရှိဖို့ရာနှင့်အတူ 1,2 Gbps အထိရှိသည်။
ဒါဟာအစထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် Snapdragon 845 ကို 10 nm ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတွင်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် 8 nm ကိုခုန်တက်သွားတဲ့အခါဒီပရိုဆက်ဆာနဲ့သုံးမှာမဟုတ်ဘူး Samsung ပြီးသွားပြီ ခင်ဗျားတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ မြင့်မားတဲ့အကွာအဝေးအတွက် Qualcomm ပရိုဆက်ဆာအသစ်ပါ။
တူဖုန်းများ Galaxy S9 နှင့် Xiaomi Mi7တို့ဖြစ်သည် သူတို့ကဒီပရိုဆက်ဆာကိုထည့်သွင်းဖို့ပထမ ဦး ဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တရား ၀ င်အတည်မပြုရသေးသော်လည်း၎င်းသည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအရာခပ်သိမ်းကပြသည်။ Qualcomm မှတစ်ခုခုကိုအတည်ပြုရန်စောင့်နေရဆဲဖြစ်သည် Snapdragon 845 သည်နောက်ဆုံးဒီဇင်ဘာလတွင်ရောက်ရှိမည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောတင်ပြသည့်ရက်စွဲ Snapdragon 845 ကိုစစ်ထုတ်သည်
Nokia2- ကုမ္ပဏီရဲ့နိမ့်ပါးတဲ့အဆင့်အတန်းကိုအတည်ပြုခြင်း
သင်၏တည်နေရာကိုအချိန်နှင့်အမျှ WhatsApp တွင်မည်သို့ဝေမျှမည်၊ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်အသုံးဝင်သည်